အ​ဟောင်းကို အကုန်​ဖြုတ်​ပါမှ အဟုတ်​ တစ်​ကယ်​ကို ​ပြောင်းပါလိမ့်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အ​ဟောင်းကို အကုန်​ဖြုတ်​ပါမှ အဟုတ်​ တစ်​ကယ်​ကို ​ပြောင်းပါလိမ့်​
အ​ဟောင်းကို အကုန်​ဖြုတ်​ပါမှ အဟုတ်​ တစ်​ကယ်​ကို ​ပြောင်းပါလိမ့်​
Posted by naywoon ni on Oct 31, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary |5comments
​နေ၀န်းနီ - အ​တွေး
အဟုတ်​ တစ်​ကယ်​ကို ​ပြောင်းပါလိမ့်​
​ရေးလည်း ​ရေးချင်​တယ်​ ။ ​ရေးလည်းမ​ရေး ရဲဘူး ။ ​ဆိုတာလိုပဲ ။ ကဲ………ဆို​ရေးရှိက ဆက်​ဆိုယုံပဲ​ပေါ့ ။ ဘာအ​ကြောင်း ​ပြောရမလဲ ။ လူတိုင်း​ပြော​နေတဲ့ ၂၀၁၅ အ​ကြောင်းပဲ​ပေါ့ ။ ဒါ​ပေမဲ့ သူတစ်​ကာ​တွေလို ဆဲမှာ​တော့ မ​ဟုတ်​ဘူး ။ ဒီစာဖတ်​မိတဲ့ သူဆဲချင်​ဆဲပါ​စေ​လေ …….ဆိုတဲ့ အ​တွေးနဲ့ ​ရေးဖြစ်​တာ ။ လူတိုင်းသိပြီးသား ၂၀၁၅ မှာဘာ​မျှော်​လင့်​သလဲဆိုတာ ။ ပြည်​သူ့ကိုယ်​စားပြု ဒီမိုက​ရေစီ အစိုးရကို ​တော်​​တော်​များများကလိုလား ​နေကြတာ ။ ​နေ၀န်းနီ ​တွေး​နေမိတာက တိုင်းပြည်​က ဒီမိုက​ရေစီ အစိုးရအုပ်​ချုပ်​တာနဲ့ အဲ့တိုင်းပြည်​ ဒီမိုက​ရေစီရ​ရောလား ။ ဒီမိုက​ရေစီ ဆိုတာ ​ရော့ အင့်​ လို့​ပေးလို့ရတဲ့ အရာလား ? ပြည်​သူက​ကော ဒီမိုကရက်​တစ်​ ဖြစ်​​နေဖို့မလိုဘူးလား ။ ဒီမိုကရက်​တစ်​ဖြစ်​ဖို့ အ​ခြေခံ အ​ကြောင်းတရားဖြစ်​တဲ့ ကိုယ်​ချင်းစာစိတ်​ ရာနှုန်းပြည့်​ထားနိုင်​ပြီလား ? ။
(လူမှု​ရေး ဘာသာ​ရေး အ​ကြောင်းပြချက်​​တွေနဲ့ ခုထိ အသံချဲ့စက်​​တွေမိုင်​ကုန်​ဖွင့်​​နေတုန်း ။ တားဆီးမဲ့ သူလည်းမရှိဘူး ။ ထိ​ရောက်​တဲ့ ဥပ​ဒေလည်းမပြဌာန်းထားဘူး ။ ရှိတဲ့ ဥပ​ဒေကလည်း ဘာသာ​ရေးလို့ ​ခေါင်းစဉ်​တပ်​လိုက်​တာနဲ့ ချွင်းချက်​ဖြစ်​သွား​ရော ။ စကားအဖြစ်​​ပြောမိတာ​တောင်​မှ “ငါတို့က ဘာသာ​ရေး လုပ်​​နေတာ မင်းက ဗုဒ္ဓ ဘာသာမဟုတ်​ဘူးလား ရန်​အရှာခံလိုက်​ရ​သေးတယ်​ ။ ​အော်​ ခု​ခေတ်​ ဘာသာ​ရေးလုပ်​တယ်​ဆိုတာ အသံချဲ့ စက်​နဲ့ အလှူခံလိုက်​တာကိုးလို့ ဘုရား​ဟောခဲ့တဲ့ တရား​တွေ စာအုပ်​​တွေထဲ အုပ်​မိကုန်​ပြီထင်​ရဲ့ ။ ​နေ၀န်းနီ နားလည်​ထားတာက လူတစ်​ဦးတစ်​​ယောက်​ အစုအဖွဲ့ တစ်​ခုရဲ့ လွတ်​လပ်​စွာ ကိုးကွယ်​ပိုင်​ခွင့်​ ဟာ အခြားလူတစ်​ဦးတစ်​​ယောက်​ အခြား ဘာသာမတူတဲ့ အစုအဖွဲ့ တစ်​ခုကို ဘာအ​ကြောင်းနဲ့ မှ အ​နှောက်​အယှက်​မဖြစ်​​စေရပါဘူး ) ကိုယ်​ကျင့်​တရား​ကော ဘယ်​​လောက်​ပြီးပြည့်​စုံ​နေပြီလဲ ? ။ လူတိုင်းလိုက်​နာသင့်​တဲ့ ကျင့်​၀တ်​က​ကော ဘယ်​​လောက်​ လိုက်​နာ​နေပြီလဲ ? ။ ( အ​သေးအဖွဲ လမ်း​ပေါ်အမှိုက်​ပစ်​ခဲ့တာ နံရံမှာကွမ်း​တွေး​တွေရဲ​နေ​အောင်​ ​ထွေးပစ်​ခဲ့တာ ကအစ )
ဒါက တစ်​ကိုယ်​​ရေ အပိုင်း ​နောက်​စီးပွား​ရေး ပညာ​ရေး ကျန်းမာ​ရေး အားလုံး အကုန်​ ​ပြောင်းလဲရမှာ ။ စီးပွား​ရေး နဲ့ ပါတ်​သက်​ပြီး ​ပြောရမှာ အင်​မတန်​ ရှက်​စရာ​ကောင်းတယ်​ ။ ဟုတ်​တယ်​​လေ ။ စိုက်​ပျိုးထွက်​ကုန်​​လေးနဲ့ ​မြေ​ပေါ်​မြေ​အောက်​ သယံဇာတ ​ရောင်းစားပြီး လက်​ချုပ်​အပ်​နဲ့ အပ်​ချည်​​တောင်​မှ အိန္ဒိယ နဲ့ တရုတ်​က မ၀င်​ရင်​ ကိုယ်​၀တ်​ထားတဲ့ ကိုယ်​ပြည်​တွင်းမထွက်​တဲ့ အင်္ကျီစုတ်​ လုံချည်​စုတ်​က​လေး​တောင်​ ဖာဖို့ မြန်​မာပြည်​ဖြစ်​ လက်​ချုပ်​အပ်​နဲ့ အပ်​ချည်​ အရည်​အ​သွေးမှီ တာမရှိတာ ဘယ်​​လောက်​ရှက်​ဖို့​ကောင်းလဲ ။ ကျန်​တာ ​ပြောမ​နေနဲ့ ။
ပညာ​ရေးမှာ​ကော မူလတန်းကတည်းက ကျူရှင်​မှ မယူရင်​ မဖြစ်​တဲ့ စနစ်​ကို ခင်​ဗျားတို့ ကြိုက်​ကြလား ။ အတန်း​လေး နဲနဲ ကြီးလာ​တော့ ဂိုက်​ တဲ့​ဘော်​ဒါ တဲ့ ။ အတန်းပိုင်​ဆီမယ်​ ကျူရှင်​ယူစရာ မလိုတဲ့ ပညာ​ရေးစနစ်​ ဂိုက်​တို့ ​ဘော်​ဒါတို့ မလိုတဲ့ ပညာ​ရေး စနစ်​ ​ပြောင်းလဲလို့ မရဘူးလား ။ ဒါ​တွေ အသံထွက်​လာတာ ၁၉၈၈ ​နောက်​ပိုင်းမှပါ ။ ၈၈ မတိုင်​ခင်​က ဆို ကျူရှင်​ဆိုတာ​တောင်​ ဘာသာတိုင်း မရှိပါဘူး ။ စာမလိုက်​နိုင်​တဲ့ ​ကျောင်းသား​လောက်​ပဲ အပြင်​ကျူရှင်​ယူကြတာ ။ အဲ့ဒိတုန်းက ပညာ​ရေးက လည်း အခု လက်​ရှိထက်​မနိမ့်​ကျပါဘူး ။ ပညာ​ရေး အဆင့်​မြင့်​လာတာလို့​တော့ မ​ပြောနဲ့ ။ ပညာ​ရေး အဆင့်​မြင့်​လာတယ်​ဆိုရင်​ ခုဆယ်​တန်းတက်​​နေတဲ့က​လေး အိမ်​နီးချင်းနိုင်​ငံက စစ်​တဲ့ အတန်းတူ စာ​မေးပွဲ တစ်​ခု​လောက်​ ၀င်​​ဖြေခိုင်းကြည့်​မလို့ ။
ကဲ အဲ့ဒိ​တော့ ​ရှေ့က မူဝါဒ အ​ဟောင်း​တွေ စာရွက်​​ပေါ်မှာ မဖြစ်​ညစ်​ကျယ်​ ဆွဲထားတဲ့ စီမံကိန်း​တွေ ဖြုတ်​ချရမှာပဲ ။ အဲ့သလို ဖြုတ်​ချနိုင်​ဖို့ အတွက်​ လူထု ကြားထဲမှာ ထည်​ထည်​၀င်​၀င်​ မ​နေဖူးပဲ အ​ပေါ်စီးက​နေ ​တောင်​တစ်​ခွန်း​မြောက်​တစ်​ခွန်း ​ပြော​နေတဲ့ သူ​တွေကိုလည်း ဖြုတ်​ချရမှာပဲ ။ ဒါမှ လက်​ရှိ အ​ခြေအ​နေနဲ့ ကိုက်​ညီတဲ့ စနစ်​ လက်​ရှိ လူထုရဲ့ လိုအပ်​ချက်​ ကိုဖြည့်​စည်း​ပေးနိုင်​မဲ့ အစိုးရ တစ်​ရပ်​ ​ပေါ်ထွန်းလာမယ်​ ။ ​ပေါ်ထွန်းလာဖို့လည်းလိုမယ်​ ။ အဲ့သာ​ကြောင့်​
အ​ဟောင်း အကုန်​ဖြုတ်​နိုင်​မှ အဟုတ်​တစ်​ကယ်​ ​ပြောင်းနိုင်​မှာပါ လို့ ။
အကုန်ပြောင်း သူပုန်ဟောင်း ဒဂုံပြောင်း ဂဠုန်ဒေါင်း
တိုင်းပြည် မှာ အရေးတကြီး လိုနေတာ က ခိုင်မာ တဲ့ ဥပဒေတွေ၊ တရားစီရင်မှု နဲ့ ပြစ်ဒါဏ်တွေပါ။
ကျွန်မတို့ လူမျိုး တွေ ဆိုတာ ကြောက်တတ်သူများပါတယ်။
အခုဟာ က ခေါင်ကို မလုံ လို့ပါ။ ဥပဒေ အထက် မှာ လူတန်းစား တစ်ရပ် ရှိနေသမျှ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ပါ။
မဖြုတ်ဘဲ သူတို့ ဟာသူတို့ ဆင်းမလား မျှော်မိခဲ့သေးတယ်။
အခု တော့ မဆင်းတဲ့ အပြင် လူ တွေ လက်မခံ မှန်းသိလဲ အရှက်ကင်းကင်း နဲ့ ရသလောက် ဆက် နေကြဦးမဲ့ ပုံဘဲ။
အလွယ် နဲ့တော့ ပြုတ်ဖို့လမ်းမရှိဘူး။
ကျွန်မတော့ ဒီလောက် ဥစ္စာပစ္စည်း မက်ပြီး အတ္တကြီး နေကြတာ တရား မရှိကြလို့ ဆိုတာ ပြနေကြတယ် မှန်းတာဘဲ။
ဒီလို လူ တွေ က အကောင်းဘက်ကို ပြောင်းသွားဖို့ ရှိပါဦးမလားပါဘဲ။
အဲဒါကိုလူ တွေ က NLD တောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်မယ် မှန်းနေကြ တာ။
ကျွန်မ တော့ မထင်ဘူး။
ဒါကြောင့် ရနိုင်သ၍ NLD ဘက်ကို မဝေဝါးသွားကြအောင် ပြောနေရတာပါ။
ဒါကိုမဟာပညာသျှိ များ ရဲ့ သွေးထိုးမှု တွေကလဲ တစ်အားပါဘဲ။ အဖျက်တွေ။
အဲ့ ကိစ္စ ( ဥပ​ဒေ စိုးမိုး​ရေး ကိစ္စ ) ​ပြောရရင်​ ဆရာ ​ကျော်​၀င်းရဲ့ “ဒရွတ်​တိုက်​ ဆွဲ​ခေါ်ခြင်း ” က​နေပြန်​​ပြောချင်​တာ နဲနဲ ​စော​နေ​သေးလားလို့ ၈ ရက်​​နေ့ ​နောက်​ပိုင်းမှ ​ပြောမလို့ ​စောင့်​​နေတာ
ရှစ် ရက်နေ့နောက်ပိုင်း မှာ ကိုယ့်လူ တွေ အတွက် အလုပ်တွေ ပိုပြီး ရှုပ်ချင် ပါတယ် အဘနီရယ်။
အခွင့်မရခဲ့ရင်တော့ ကိုယ့်အတွက် ဘဲ ကို ရုန်း လုပ်တော့မယ်။
ခုတလော အာဃာဓ မကင်းတဲ့ စကားတွေ၊ မနာလိုခြင်းကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ စကားတွေကို မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာမိပါဘူး။ သင်္ကန်းကျွန်း အမတ်တစ်ဦးက “အခုပုံက ရွေးကောက်ခံ အာဏာရှင် ဖြစ်လာမယ်” လို့ ပြောလိုက်တာ ဖတ်မိတော့ ပြောစရာရှိလာပါတယ်။
သာမန်ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ ဟိုဘက် ဒီဘက် ထောက်ခံတာ အချိုးတူလေလေ အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်လေလေ၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ အခွင့်အလန်းများလေလေပါ။ အချိန်မရွေး ပြုတ်ကျသွားနိုင်တာကိုး။ ဒါဟာ ပုံမှန်အနေအထားမှာ ပြောရင် မှန်တယ်။
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီမှာ တပ်ထဲက ၂၅% သားက အဆင်သင့်စောင့်နေတယ်။ တိုင်းပြည်က ထောက်ခံပြီး ၆၀%လောက် နိုင်လာတဲ့ ပါတီတောင်မှ စစ်တပ်က မထောက်ခံရင် အစိုးရဖွဲ့မရဘူး။ ပါတီတစ်ခုကလည်း စစ်တပ်က လူတွေထွက်ပြီး ဖွဲ့ထားတဲ့ ပါတီ။ ဒီတော့ ဒီစနစ်ဟာ ရွေးကောက်ခံ ပါတီအာဏာရမယ့် စနစ်မဟုတ်ပဲ စစ်တပ် ထာဝရ အာဏာရမယ့် စနစ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့် ပြည်သူဟာ NLD ကို ပုံအောပြီး ထောက်ခံနေတာပဲ။ NLD ကို ကြိုက်ခြင်း မကြိုက်ခြင်းထက် ထာဝရ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို တိုက်နေတာလို့ မြင်ဖို့ လိုတယ်။ ဒီတော့ ရွေးကောက်ခံ အာဏာရှင် စနစ် ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောတာဟာ လွှတ်တော်ထဲဝင်လိုက်၊ အများသည်းခြေကြိုက်အဆိုလေး တင်လိုက်၊ ပြည်သူက ငါတို့ မုန်းတဲ့ ဟိုကောင်တွေကို တွယ်ရဲသကွဆိုပြီး လက်ခုပ်တီးတာလေး ခံလိုက် ဆိုတာထက် မပိုတဲ့သူတွေ မနာလိုလို့ ပြောခြင်းပဲလို့ (ကျွန်တော့်အနေနဲ့) ထင်တယ်။
လမ်းချင်းတူရင် လူချင်းတွေ့တယ်လို့ မောင်ချောနွယ် ပြောခဲ့တယ်။ အခုက လမ်းချင်း တူသယောင်နဲ့ မတူဖြစ်နေတာ။ အများကြိုက် အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စကားတွေတော့ ပြောတယ်။ NLDကိုကျ (ထောက်ခံရမယ့် မပြောဘူး) မိတ်ဆွေလိုတောင် သဘောမထားဘူးဆိုရင် တနေရာရာမှာ လမ်းချင်းမတူတော့ ဖြစ်နေပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲလမ်း တူနေတဲ့နေရာမှာတောင် မတူညီမှု ရှိနေပြီဆိုရင် NLD သည် ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားလမ်းကို လာပိတ်နေတယ် ထင်လို့ တိုက်ခိုက်တာပဲ ဖြစ်စရာ ကျန်ပါတော့တယ်။
ပြောပါရစေ။ ကိုယ့်နာမည်ကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ သူများကို တိုက်ခိုက်ပြီးမှ တည်ဆောက်လို့ရမယ်ထင်နေတဲ့ လူမိုက်တွေထဲ မပါပါစေနဲ့။ စေတနာနဲ့ သတိပေးတာပါ